MUQDISHO:Qoraal ay soo saareen Madasha Xisbiyada Qaran ee Soomaaliya | RunsheegNews
MUQDISHO:Qoraal ay soo saareen Madasha Xisbiyada Qaran ee Soomaaliya
Madasha Xisbiyada Qaran-Forum for National Parties
Juun 20, 2020
DEGDEG: WAR-SAXAAFADEED KUSAABSAN DOORASHADA DALKA
Madasha Xisbiyada Qaran(MXQ) Iyadoo cuskaneysa Qodobada 60.ad & 91.ad ee Dastuurka KMG iyo Qodobada Xeerka doorashooyinka 13..41, 3) & 53aad (1,3) Madashu waxey ku celineysaa walaaca ay ka qabto in dawladdu ka cagajiideyso si ula kac ah qabashada doorasho waqtigeeda ku dhacda oo heshiis lagu yahay taasoo sida muuqata hoggaanka dawladdu ku mashquulsan yahay ka shaqeynta dib u dhac iyo muddo dheereysi taasoo aan suuragal ahayn.
Kadib markii Madashu aragtey nuqulkii talo soo jeedinta Guddiga Baarlamaanka Federaalka (BFS) ee loo xilsaaray arrimaha doorashooyinka ay soo hordhigeen BFS ee ka hadlayay Asteynta Kuraasta, Qoondada Haweenka, Kuraasta Waqooyi iyo Maqaamka Caasimadda dalka iyo Matalaadda Gobolka Banaadir.
Kadib markay Madashu tixgalisey waqtiga ka dhiman muddo xileedka Baarlamaanka Soomaaliyeed sida uu qabo dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalku ayna caddaatey in dawladdu aysan u jeedin qabasho Doorashadii laga sugayay oo waqtigeeda ku dhacdo lagana heshiisyo, waxay madashu soo saartey go'aamadan;
1- Madashu waxey caddeyneysaa in hoggaanka Dawladda Soomaaliya uu ku fashilmay qabashada Doorasho Qof iyo Cod ah oo waqtigeeda ku dhacda heshiisna lagu yahay, waxeyna Madashu markale ku celineysaa in kulan degdeg ah la isugu yimaaddo si looga tashado loogana heshiiyo Nooca doorasho ee ay tahay in la qabto inta aysan dhicin muddo xileedka Dastuuriga ah ee Baarlamaanka dalka. Hoggaanka dawladdu waa inuu wajahaa xaqiiqada hortaalla.
2- Madahsu waxey Baarlamaanka ugu baaqeysaa inuusan ansixin dhammaan qodobaddii uu soo saaray Guddiga waayo waxay dalka iyo deegaanadaba u horseedeysaa qalalaase iyo degenaasho la'aan ay xalintiisu adkaato muddo dheer.
3- may tahay sharci darro qaabka loosoo jeediyay Gobolka Banaadir, waxuuna gobolka Banaadir mudan yahay matalaad u qalanta tirada shacabka ku nool
4- In Baarlamaanka laga sugayey maqaamka Magaalada Muqdisho ee aan laga sugeynin qoondo taasna waxay duudsiineysaa xuquuq badan ayna tahay in baarlamaanka ka fiirsado arrinkaas.
5- Kuraasta Baarlamaanka waxaa iska leh oo soo doorta beelo iyo deegaan. Sidaa darteed waxaa xaq u leh may go'aan ka garaan asteyntiisa beelaha iyo Dowlad goboleedyada ee xaq uma laha qofka lasoo doortey, sidaa awgeed waa inuusan ku xadgubin Baarlamaanka xuquuqdaas.
6- Qoondada Haween ee 30% waa lama taabtaan, waxayna mudan yihiin intaas ka badan, haseyeeshee asteynta kursiga haweenka noqonaya waxaa xaq u leh go'aankiisa beelaha iyo jufooyinka oo leh heshiisyo u gaar ah dumarka kuraasta ku fadhiyana malahan go'aanka kursiga.
7- Kuraasta gobolada Waqooyi iyo qaabka loo dooranayo waa in laga heshiiyo ee aysan cid gaar ah go'aan ka gaari karin.
somalia news madasha xisbiyada qaran runsheeg